Ivenkile yeencwadi inaso esi sindululo sikrelekrele sentengiso | Abadali be-Intanethi
El ukuthengisa kubalulekile namhlanje ukukwazi ukuphembelela uluntu ngeenyawo ukuze beze kumboniso wokusekwa kwakho okanye bame emva kwemini ngenxa yesindululo sentengiso esenziwe ngendlela ekrelekrele nento enokuba “ngomnye umntu”.
Isiphakamiso sentengiso isebenzisa obona buso baziwayo kunye nabalinganiswa zoncwadi lwamandulo kwimifanekiso esivumela ukuba sibeke iqweqwe lencwadi ukuze sibe ngabo. Le venkile yeencwadi eseVilnius, ikomkhulu laseLithuania, iye yanengcamango ekrelekrele ngokusebenzisa iincwadi zakudala ezifana neHamlet okanye uDon Quixote de la Mancha ukutsala uluntu ngokubanzi.
Eli phulo isekwe kwi "Sleeveface", ebandakanya ukudala i-optical illusion yokuqhubeka kunye ne-vinyl cover kunye nempahla efanelekileyo. Kule meko ezinye iincwadi zisetyenzisiwe kwaye ziphefumlelwe yiloo ngcamango ephambeneyo eyafika ngobusuku bokusela njengehlaya kwi-2007, xa uCarl Morris edlala umculo eYurophu, i-disco yendawo eCardiff. Phakathi kweseshoni kunye ne-buoyed up for the moment, wema phambi kobuso berekhodi likaPaul McCartney waza waqala ukudansa. Umhlobo wakhe wathatha iifoto zesikrini ngekhamera yakhe kwaye ngosuku olulandelayo wazilayisha kwi-Intanethi, ngokuchanekileyo kuFacebook.
Yahamba intsholongwane kwaye senze ukuba kube namhlanje I-arhente yothando iphakamise umbono iyafana neMint Vinetu, ivenkile yeencwadi ekwikomkhulu laseLithuania enothando olukhethekileyo lweencwadi zakudala ezishicilelweyo.
UFrankenstein, uHamlet okanye uDon Quixote de la Mancha zeminye yemisebenzi yoncwadi ekhoyo ezisetyenziswa kwiintengiso ekwaziyo ukuba licebo elihle lokukhuthaza ukufundwa kwezi classics.
Iincwadi zihlala zihamba umgama omde efana nale yakudala ukuba iPantone ikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Indlela enobuchule yokutsala umdla ngesi sicelo sentengiso kwivenkile yeencwadi
Oonodoli be-porcelain abathanda ubomi ngokumangalisayo beli gcisa laseRussia